Xafiisyada DF -Muqadisho oo aan shaqo ka socon laguna kala tagay! Xiligii kala guurka oo bilawday - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Xafiisyada DF -Muqadisho oo aan shaqo ka socon laguna kala tagay! Xiligii...
Xafiisyada DF -Muqadisho oo aan shaqo ka socon laguna kala tagay! Xiligii kala guurka oo bilawday
Labadii bilood ee u danbeeysay, waxaa ka bilaawday magalaada Muqadisho astamihii lagu yaqiinay xiliga kala guurka taas oo ay ka mid tahay in mas’uuliyiinta dowlada oo ay u horeeyaan wasiirada ilaa agaasime waaxeedyada ayan soo xaadirin shaqada xafiisyada dowladda.
Ma aha kaliya in cudurka CoronaVirus uu keenay in ay martaan xafiisyadda dowlada, laakiin waxaa taa wehliya iyada oo ayan jirin cid mas’uuliyad iska saareysa in ay socoto howlihii dowlada, gaar ahaan kuwii qabanayay howlaha muhim u ah nolol maalmeedka shacabka ku dhaqan Gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka.
Waxaa maalinba maalinta ka danbeeeysa sii lumaya asluubtii shaqo ee shaqaalaha dowlada iyada oo ayan jirin cid dabagal ku sameeynaysa geedi socodka howlaha dowlada fedaraalka. Mid ka mid wasiiro ku xigeenada Dowlada Federaalka ayaa u sheegay MOL in wax shaqo dowlo ah ayan ka socon dalka.
“.. walaahi ma garanayo xiligii iigu danbeeysay oo aan u shaqo tagay xafiiskeeyga, yaa loo sheeqeeyaa mar hadii dalku galay xaalad siyaasadeed oo jahaweer leh”, ayuu yiri mid ka mida wasiir ku xigeenada dowlada fedaraalka.
Waxa uu intaas ku daray “..dhanka kale, mar hadii Xasan Kheyre uu la wareegay mas’uuliyadii wasaaradaha , oo uu xafiiskiisa uu la wareegay howlihii ay qaban lahaayeen wasaaradaha muhimka ah, hade marka uu safro xumukaadana isaga ayaa ay la safartaa. mana jiro cid iska xilsaaraysa fulinta howlihii xukuumada dowlada fedaraalka”.
Dhanka kale, Farmaajo iyo agaasimahiisa Madaxtooyada Nuur Fuursade, kaas oo owrya-wadaag la ah Farmaajo, loogana yaqaano madaxtooyada “Nuur Hurdaaye” ayaa ku xiran xafiisyadooda iyaga oo aan wax war u-haynin waxa ka socda dalka, gaar ahaan xukuumada uu hogaamiyo, Farmaajo.
Previous articleWararka ka imaanaya Doha oo sheegaya in Kheyre Cisbitaal lagu daweeynayo
Next articleSomalia oo ku guuleysatay Madaxweyne Ku xigeenka Golaha Guud ee QM.